यामाहाले ल्यायो ‘द २०१८ स्टार भेन्चर’
यामाहाले अमेरिकामा सर्बाधिक एड्भान्स्ड टुरिङ मोटरसाइकल द २०१८ स्टार भेन्चर लन्च गरेको छ । यसको मूल्य २४ हजार ९ सय ९९ डलर अर्थात करिब २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । आगामी अगस्ट महिनाको पहिलो सातादेखि यसलाई अमेरिकी बजारमा उपलब्ध गराइने बताइएको छ । द...
केटीएमका नयाँ मोडल नेपाली बजारमा
काठमाडौं – केटीएमका नयाँ मोडलका बाइक नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । एक कार्यक्रमका बीच केटीएमको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छाले बाइक सार्वजनिक गरे । कम्पनीले आरसी ३९०, आरसी २००, ३९० ड्युक, २५० ड्यु...
रोल्स रोयसले ल्यायो विश्वकै महंगो गाडी
रोल्स रोयसले विश्वकै महंगो गाडीलाई सार्वजनिक गरेको छ । गाडी पारखीहरुका लागि रोल्स रोयसले एक निजी बिमानमा हुने विशिष्ट सुविधा जत्तिकै सुविधा यो गाडीमा समावेश गरेको छ । यसलाई इटालीमा आयोजित अटो शो Concorso d’Eleganza at Villa d’Este मा प्रदर्शन गरिएको...
फिएटको जिप कम्पास एसयूभी आउँदै
इटालियन कार निर्माता कम्पनी फिएटले भारतमै पूर्ण रुपमा निर्माण भएको जिप कम्पास एसयूभीलाई सार्वजनिक गरेको छ । फिएट क्रिस्लर इण्डियाले पूर्ण रुपमा भारतमै निर्माण गरिएको पहिलो एसयुभी रहेको जनाएको छ । पूणेमा रहेको कम्पनीवाट उत्पादन थालिने यो एसयुभी आगामी...
रेनल्ट क्विड ईजी–आर एएमटी नेपालमा
काठमाडौं – रेनल्ट गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बितरक एडभान्स अटोमोबाइल्स प्रालिले अल न्यू रेनल्ट क्विड एएमटी (AMT) अनावरण गरेको छ । नयाँ रेनल्ट क्विड एएमटी (AMT) अत्याधुनिक प्रविधि तथा लक्जरी सहित बजारमा उपलब्ध छ । नयाँ रेनल्ट क्विड एएमटीमा ईजी–आर टे...
महिन्द्रा केयूभी १०० को नयाँ मोडल
काठमाडौं – महिन्द्रा गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक अग्नि इन्कर्पोरेटेडले लोकप्रिय कम्प्याक्ट एसयूभी महिन्द्रा केयूभी १०० को नयाँ मोडल नेपालमा ल्याएको छ । द योङ एसयूभी भनिने महिन्द्रा केयूभी १०० अझै आकर्षक हुनुका साथै नयाँ प्रिमियम तथा एक्स्ट्रा...
काठमाडौं – जापनिज गाडी इसुजुका दुई नयाँ मोडल नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । नेपालका लागि इसुजुको आधिकारिक बितरक कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजले नेपाली बजारमा इसुजुको डी–म्याक्स भी–क्रस र एस–क्याब मोडल नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको हो । डी–म्याक्स भी...
भारतमा आयो होन्डा अफ्रिका ट्वीन
होन्डाले भारतीय बजारमा बहुप्रतिक्षीत बाइक अफ्रिका ट्वीन अर्थात सीआरएफ १००० एल ल्याएको छ । विश्व बजारमा सन् २०१५ मै उपलब्ध भए पनि भारतीय बजारमा यो हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको हो । यो भन्दा पहिले २०१६ अटो एक्स्पोमा पनि यसलाई प्रदर्शन गरिएको थियो । &nbs...
नयाँ अवतारमा आउदैछ बजाज बक्सर
भारतमा बजाज अटोले आफ्नो लोकप्रिय बाइक ‘बक्सर’ लाई नयाँ अवतारमा लन्च गर्ने तयारी गरेको छ । बजाजको नयाँ बाइक बक्सर एक्स १५० को एड्भेन्चर भेरिएन्ट हालै टेस्टिङको अवस्थामा देखिएको हो । नयाँ बक्सर स्पोर्टी लुक्समा उपलब्ध हुनेछ । यसमा नयाँ ब्ल्याक ए...
रेनल्टको नयाँ मोडल क्विड १.० लिटर नेपालमा
काठमाडौं – नेपालमा पनि रेनल्ट क्विडको नयाँ मोडल सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनीले एक कार्यक्रमका बीच ‘लिभ फर मोर एडिसन’ भनेर चिनिने रेनल्ट क्विड सार्वजनिक गरेको छ । यसमा १.० लिटर स्मार्ट कन्ट्रोल इफिसियन्सी इन्जिन रहेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेक...
हिरो ‘ग्ल्यामर’ नयाँ रुपमा
एजेन्सी – हिरोले आफ्नो बाइक ‘ग्ल्यामर’ लाई नयाँ अवतारमा प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ ग्ल्यामर १२५ लाई बर्षको प्रारम्भमा अर्जेन्टिनामा सार्वजनिक गरिएको थियो र यो अवको केही समयमा भारतीय बजारमा उपलब्ध हुने बताइएको छ । यो बाइकको प्रतिस्पर्धा होन्डा सिबी साइन,...
बेनेलीले ल्यायो ३ नयाँ मोटरसाइकल, मूल्य ११ लाख रुपैयाँसम्म
काठमाडौं –इटालियन मोटरसाइकल ब्रान्ड बेनेलीका ३ वटा बाइक नेपालमा सार्वजनिक गरिएका छन् । बेनेलीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता केटीएम इन्टरनेसल ट्रेडिङले ती बाइक उपलब्ध गराएको हो । बाइकको मूल्य १ लाख ९० हजारदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्म छ । बाइकहरुमा टीएनट...
अब काठमाडौंदेखि जनकपुरसम्म एसीयुक्त सुमो
काठमाडौं – काठमाडौंदेखि जनकुपुरसम्मको यात्राका लागि सुविधासम्पन्न सुमो सेवा सञ्चलनमा आएको छ । नयाँ बर्ष २०७४ को अवसर पारेर चुरीयामाई यातायातले उक्त सेवा सञ्चालन गरेको हो । कम्पनीका अध्यक्ष हीराबहादुर मगरकाअनुसार १५ थान एसीयुक्त सुमो मार्फत सेवाको सुर...
नयाँ लुक्समा हिरो प्लेजर
एजेन्सी – हिरोको प्लेजर स्कुटर नयाँ लुक्सका साथ बजारमा आउने तयारी गरेको छ । प्लेजर अटोमेटिक हेडल्याम्प र नयाँ आकर्षक रङमा उपलब्ध छ । यसमा साइड स्ट्यान्ड इन्डिकेटर उपलब्ध छ । यद्यपि यसको डिजाइन र स्टाइलिङमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । हिरो प...
हिरोले यी दुई बाइकको उत्पादन बन्द गर्ने
एजेन्सी – हिरो मोटोकर्पले आफ्ना दुई बाइक हंक र करिज्मा जेडएमआरको उत्पादन बन्द गर्ने भएको छ । आशातित रुपमा बिक्री हुन नसकेका कारण यी दुई बाइकको उत्पादन बन्द गर्न लागेको बताइएको छ । हिरो हंक कम्पनीको पहिलो १५० सिसीको प्रिमियम बाइक थियो । सुरुवाती समयमा...
लिमिटेड एडिसनमा आयो स्कोरपियो एडभेन्चर
एजेन्सी । एसयुभीमा लोकप्रिय रहेको महिन्द्राले आफ्नो स्कोरपियो भर्जनको ‘स्कोरपियो एडभेन्चर’ को लिमिटेड एडिसन बजारमा निकालेको छ । भारतिय बजारमा आएको यो एसयुभी टु ह्विल र फोर ह्विल अप्सनको रहेको छ । जसको मुल्य फरक फरक समेत रहेको छ । स्कोरपियो एडभेन्चरमा...
प्राविधिक कमजोरीका कारण फोर्डले ५२ हजार ट्रक फिर्ता बोलायो
एजेन्सी – अमेरिकामा फोर्ड कम्पनीले आफ्ना ५२ हजार ट्रक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । ट्रक निर्माणकै चरणमा भएको प्राविधिक कमजोरीका कारण पार्क गरीसके पछि पनि यसको चक्का चलिरहने समस्या पाइएको छ । कम्पनीले शनिबार आफ्नो वेबसाइटमा यस वारेमा सूचना प्रकाशित गर...
होन्डा डियो नयाँ स्वरुपमा
एजेन्सी – होन्डाले आफ्नो स्कुटर डियोलाई नयाँ स्वरुपमा लन्च गरेको छ । यो नयाँ मोडल बीएस फोर मापदण्डमा आधारित छ । यसको इन्जिनमा परिवर्तन गरिनुका साथै केही कस्मेटिक परिवर्तन गरिएको छ । फ्रन्ट प्यानल, नयाँ ड्युअल टोन कलर अप्सनमा दिएर यसलाई आकर्षक बनाउने...
आयो टाटा टिगोर, मूल्य कति ? विशेषता के ?
एजेन्सी – टाटा मोटर्सले भारतीय बजारमा टिगोर कार लन्च गरेको छ । टाटाले पहिले प्रचलित टियागो ह्याचब्याकमा आधारित रहेर टिगोर निर्माण गरेको छ । यद्यपि फिचरको मामिलामा यो टियागो भन्दा धेरै अगाडि छ । टाटा टिगोरमा अघिल्लो भागमा ड्युअल टोन बम्पर, नयाँ हनीकम्...
हिरोको नयाँ हंक आउदैं
एजेन्सी । हिरो मोटोकर्पले आफ्नो कम्प्युटर बाइक हंकलाई नयाँ लुकमा प्रस्तुत गर्दैछ । चाडैनै बजारमा आउने यो बाइकमा पछिल्लो हंकको तुलनामा धेरै कुरा परिवर्तन गरेको कम्पनीले जनाएको छ । हिरोका अनुसार हंक बाइक दुईवटा भेरिएन्टमा आउने छ । नयाँ बाइकमा स्पार्क प...
पोखरा – सिएट टायरको ग्राहक भेटघाट कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ । व्यवसाय प्रवद्र्धनको लक्ष्यसहित कार्यक्रम गरिएको हो । सिएट टायरको विशेषताहरुका बारेमा ग्राहकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको सिएट टायरका लागि यस क्षेत्रको आधिकार...
बजाज एभेन्जर ४ सय सिसिमा आउने
एजेन्सी । बजाजले उत्पादन गर्ने आफ्नो क्रुज बाइक एभेन्जरलाई अझ बढी पावरफुल बनाएर बजारमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । बजाजले एभेन्जर मोडलको बाइक यसअघिनै १५० र २२० सिसिमा उपलब्ध गराईसकेको छ । अब आउने एभेन्जर बाइक भने ४०० सिसि क्षमताको हुने छ । यो बा...
गोरखा जिप आउँदैं
एजेन्सी । पैसाकै कारण करोडौं रुपैंया पर्ने ह्यामर गाडीको तिर्सना मेट्न नपाएका सवारी साधनका पारखीहरुलाई फोर्स मोटर्सले गोरखालाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा ल्याएको छ । ह्यामर गाडीकै जस्तै बाहिरी वनावट भएको यो एसयुभी ३ र ५ वटा ढोकाको अप्सनमा रहेको छ । भारतिय...
यामाहाको स्पोर्टि बाइक आउदै
एजेन्सी । यामाहाले स्पोर्टस् बाइक आर वान फाइभ भि थ्रि प्वाईन्ट जिरोलाई सार्वजनिक गर्दैछ । ईण्डोनेसियामा हुने यो बाइकको बुकिङ अप्रिल १ तारिखवाट हुने कम्पनीले जनाएको छ । यामाहाको यो नयाँ स्पोर्टस् बाइक १ सय ५५ दशमलब १ सिसिमा लिक्चिड कुल्डको हुने छ । यो...